Google My Business: ဒတ်ခ်ျတောင်းလမ်းညွှန် (အပိုင်းနှစ်) • DutchtownSTL.org
Google My Business အပိုင်း ၂ - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် Dutchtown ၏လမ်းညွှန်
In Google My Business အတွက် Dutchtown လမ်းညွှန်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, ငါတို့ကသေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေဂူဂဲလ်မှာသူတို့ရဲ့စာရင်းများကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်နိုင်ပုံကိုပြသခဲ့သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်လူတိုင်းသည်စျေးဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အခြားအရာအားလုံးကိုရှာဖွေရန် Google ကိုအသုံးပြုကြသည်။ ဖောက်သည်များဆွဲဆောင်ရန်သင်၏စီးပွားရေး၏ဂူဂဲလ်ပရိုဖိုင်းကိုစီမံရန်အရေးကြီးသည်။
အကြှနျုပျ၏စီးပွားရေး google သင်၏ပရိုဖိုင်းကိုစီမံရန်သင်အသုံးပြုသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏လိပ်စာ၊ အလုပ်ချိန်နှင့်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်စသည့်အခြေခံကျသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးအပ်ခြင်းအပြင်၊ ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်သင့်လုပ်ငန်းကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်စေရန်နှင့်ဖောက်သည်များပိုမိုရောက်ရှိရန်အထောက်အကူပြုသည့်ကိရိယာများကိုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့လမ်းညွှန်၏အပိုင်း (၂) တွင်သင်၏ပရိုဖိုင်းကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် Google My Business ၏ပိုမိုအဆင့်မြင့်သောအင်္ဂါရပ်အချို့ထဲကို ၀ င်ရောက်ခြင်း၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်များထက်ကျော်လွန်သွားလိမ့်မည်။ သင်၏ပရိုဖိုင်းကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်လက်ရှိနှင့်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များနှင့်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်းအတွက်အထောက်အကူပြုသောအကြံဥာဏ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ပေးမည်။
Google ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးဗီဒီယိုလမ်းညွှန်အပိုင်း ၂
နောက်တစ်ခါ, Dutchtown နေထိုင်သူနှင့် စီးပွားရေးပိုင်ရှင် Janessa West သည်သင်၏ guide ည့်လမ်းညွှန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်၏ဂူဂဲလ်စီးပွားရေးပရိုဖိုင်းကိုထင်ရှားပေါ်လွင်စေရန်အကြံဥာဏ်များနှင့်လှည့်ကွက်များကိုလိုက်နာပါ။
ဗွီဒီယိုကိုသင်ရှာနိုင်သည် ဂူဂဲလ် My Business အတွက်လမ်းညွှန်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ထိုအပေါ် DutchtownSTL ယူကျု့ချန်နယ်.
တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လျှောက်လှမ်းပါ - အဆင့်မြင့် Google My Business Features
နောက်ဆုံးခြေလှမ်းလမ်းညွှန်တွင်စိတ်ကူးယဉ် South Side Snack ဆိုင်အတွက်ပရိုဖိုင်းတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲဒီမုန့်ဆိုင်ဟာ Google နဲ့ Google Maps မှာရှာဖွေမှုတွေပေါ်လာတယ်။ (ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပမာကတကယ့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ဆိုင်ကိုခေတ္တပိတ်ထားတယ်လို့မှတ်ပြီးပြီ။ )
အကယ်၍ သင်သည် Google Maps တွင်“ အဆင်ပြေသောစတိုးဆိုင်” ကိုရှာမယ်ဆိုရင်တောင်ဘက်ခြမ်းမုန့်ဆိုင်ကိုမြေပုံပေါ်နှင့်ဘေးဘားတွင်ဖော်ပြထားသောရလဒ်များကိုတွေ့လိမ့်မည်။
သင်၏ယခင်လမ်းညွှန်အတိုင်းလိုက်နာပြီးနောက်သင်၏ပရိုဖိုင်းကိုတည်ဆောက်သောအခါဂူဂဲလ်ကအတည်ပြုနံပါတ်ပါသောပို့စကတ်ကိုသင်ပို့ကောင်းပို့လိမ့်မည်။ ၎င်းကိုအမြဲတစေမလိုအပ်ပါ၊ သို့သော်အချို့သောအခြေအနေများတွင် - အထူးသဖြင့်သင်ဂူဂဲလ်တွင်စာရင်းပြုစုထားပြီးဖြစ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုတောင်းဆိုနေလျှင် - သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးပိုင်ဆိုင်မှုကိုအတည်ပြုရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ သင်သည်ပို့စကတ်ကိုရရှိပါကသင်၏ပရိုဖိုင်းသို့ဝင်ရောက်ပါ business.google.com နှင့်သင်၏အတည်ပြုချက်ကုဒ်ရိုက်ထည့်ပါ။ တနည်းကား, ဒီအားလုံးကိစ္စများတွင်သက်ဆိုင်သည်မဟုတ်။
သင်၏ဂူဂဲလ် My Business Profile ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်
သေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ကိုင်ရန်ခက်ခဲတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏အလုပ်စာရင်းသို့အခြားအလုပ်တစ်ခုထပ်ထည့်ခြင်းသည်မသင့်တော်ပါ။ သို့သော်သင်၏စတိုးအသွင်အပြင်အပြင်၊ သင်၏ဂူဂဲလ်စီးပွားရေးပရိုဖိုင်းသည်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များရှေ့သို့တင်ပြသောမျက်နှာဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။
၎င်းအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ဂူဂဲလ်ပရိုဖိုင်းကိုမကြာခဏစစ်ဆေးပြီးမွမ်းမံရန်သတိပေးမှု (အနည်းဆုံးလစဉ်သော်လည်းကောင်းအပတ်စဉ်) ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျအကြံပေးရန်အကြံပြုသည်။ သင်၏စီးပွားရေးအချက်အလက်အားလုံးမှန်ကန်မှုရှိမရှိသေချာအောင်စစ်ဆေးပါ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုစစ်ဆေး။ ပို့စ်များကိုဖန်တီးပါ၊ ဓာတ်ပုံများထည့်ပါ။ တက်ကြွပြီးခေတ်မီသောပရိုဖိုင်းကိုသင့်အားဂူဂဲလ်တွင်ကြုံတွေ့ရမည့်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။
သင်၏အချက်အလက်ကို Google My Business တွင်မွမ်းမံခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိုဖိုင်ပေါ်ရှိအခြေခံအချက်အလက်များကိုကြည့်ကြစို့။ ၎င်းတွင်ထည့်သွင်းသင့်သည့်နောက်ဆုံးသတင်းများသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်မှုများရှိမရှိကြည့်ရအောင်။ သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုဆွဲယူရန်ဘယ်ဘက် sidebar ရှိ“ Info” link ကိုနှိပ်ပါ။
၀ န်ဆောင်မှုပေးသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ၄ ​​င်းတို့၏အဓိကတည်နေရာပြင်ပရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောနေရာများကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ တကယ်တော့ ၀ န်ဆောင်မှုနယ်မြေ ၁၆ ခုအထိကိုသင်ပေါင်းနိုင်သည်။
South Side Snack ဆိုင်သည်ဖောက်သည်များအားရောင်းချရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဟုဆိုပါစို့။ ကျွန်ုပ်တို့၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးDutchရိယာကိုသာမာန် Dutchtown areaရိယာတွင်ကန့်သတ်ထားမည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင် Dutchtown၊ Pleasant Mount၊ Marine Villa နှင့် Gravois Park တို့ပါ ၀ င်သည်။ မကြာမီလူတို့သည်“ Gravois Park ရှိစတိုးဆိုင်များ” ကိုရှာဖွေသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုင်ကိုစာရင်းပြုစုလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပမာရပ်ကွက်အတွင်းမှတော်တော်လေးတိကျတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏စီးပွားရေးသည်မက်ထရိုစိန့်လူးဝစ္စacrossရိယာတစ်လျှောက် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးနေလျှင်၊ ဒါကြောင့်လူးဝစ်, Maplewood, Affton, တက္ကသိုလ်စီးတီးနှင့်။ ထပ်မံ၍ သင်ကareasရိယာ ၁၆ ခုအထိရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင်ကမက်ထရိုareaရိယာတစ်ခုလုံးကိုအစေခံလျှင်၊ နေရာ ၁၆ ခုလုံးကိုသင်အသုံးပြုသင့်သည်။
သင်၏စီးပွားရေးပရိုဖိုင်တွင်ဂူဂဲလ် My Business ကအထူးဂုဏ်သတ္တိများများစွာထည့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ အချက်အလက်ဘောင်ကွက်ပေါ်သို့အနည်းငယ် scroll လုပ်၍“ စီးပွားရေးမှစ” ဟုအမည်တပ်ထားသောအပိုင်းကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဤနေရာတွင်သင်ယူထားသောကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံရေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ၊ သင်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ သင်လက်ခံသည့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများနှင့်အခြားအချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ဒီ attribute တချို့ကိုထည့်ကြရအောင်။
ထိပ် မှစတင်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးတွင်ခွဲခြားသတ်မှတ်သည့်အင်္ဂါရပ်အချို့ကိုထည့်နိုင်သည် - လူမည်း၊ အမျိုးသမီး ဦး ဆောင်သူသို့မဟုတ်ဝါရင့်ပိုင်ဆိုင်သည့်ပိုင်ရှင်။ လူများသည်ဤစီးပွားရေးအမျိုးအစားများကိုအထူးရှာဖွေနေကြပြီးထိုသတ်မှတ်ချက်များကသင့်အားထင်ရှားစေရန်ကူညီလိမ့်မည်။ (စကားမစပ်, ငါတို့သည်လည်းတစ် ဦး ရှိသည် Dutchtown မှပိုင်ဆိုင်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစာရင်း).
အောက်သို့ဆင်း။ သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်အများသုံးအိမ်သာရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ဖောက်သည်များအားကြိုးမဲ့အင်တာနက်ဖြင့်ကမ်းလှမ်းခြင်းရှိမရှိ - သင်၏စီးပွားရေးတွင်ဘီးတပ်ကုလားထိုင်ရရှိနိုင်မှုအကြောင်းရှာဖွေသူများအားသင်သိစေနိုင်သည်။
အထူးသဖြင့် COVID-19 ကာလအတွင်းအလားအလာရှိသောဖောက်သည်များသည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်မည်သည့်လုံခြုံရေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးများပြုလုပ်နေသည်ကိုသိလိုကြသည်။ သက်ဆိုင်သောမဆိုနှင့်အားလုံးရွေးချယ်ပါ။ ဒီအရေးအသား၏အဖြစ် စိန့်လူးဝစ္စမြို့တော်သည်မျက်နှာဖုံးစွပ်စွဲထားဆဲဖြစ်သည်, ဒါကြောင့်သေချာစေရန် "မျက်နှာဖုံးလိုအပ်သည်" နှင့် "ဝန်ထမ်းများမျက်နှာဖုံးများဝတ်ဆင်" (နှင့်သင်မျက်နှာဖုံးကိုဝတ်ဆင်သေချာ!) ။
ထပ်မံ၍ သင်လက်ခံသောငွေပေးချေမှုအမျိုးအစားများကိုသင်စာရင်းပြုစုနိုင်သည်။ သင်သာငွေသားယူပါက၊ “ ငွေသာသော” အကွက်ကိုသာရွေးပါ၊ သို့သော်သင်ကအခြားငွေပေးချေမှုများကိုလက်ခံပါက“ ငွေသားသာ” အကွက်ကိုအမှတ်မပြုပါနှင့်။ “ Cash only” နှင့်ရွေးချယ်ထားသောအခြားရွေးချယ်စရာများရှိခြင်းသည်ဖောက်သည်များကိုအထင်လွဲစေနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးတော့ဝန်ဆောင်မှုရွေးစရာတွေရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏ဥပမာဆိုင်သည်စတင်ဖြန့်ဖြူးသောကြောင့်ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုဒီမှာထည့်ရန်သေချာပါသည်။ သင်၏လုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားရွေးချယ်စရာများစွာကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဂူဂဲလ်ကသင့်အားအပိုနှင့်အထူးနာရီများကိုထည့်ရန်ရွေးချယ်ခွင့်ပေးသည်။ သင်တိကျတဲ့ပစ်ကပ်နာရီကိုကမ်းလှမ်းတာဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်သင့်စားသောက်ဆိုင်ကတနင်္ဂနွေနေ့လည်စာကိုကမ်းလှမ်းတာဖြစ်နိုင်တယ်။ “ More hours” အောက်ရှိ edit ခလုတ်ကို နှိပ်၍ ထပ်ဆောင်း ၀ န်ဆောင်မှုနာရီများစွာကိုသင်ထည့်နိုင်သည်။ ငါတို့ဥပမာမှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ပျော်ရွှင်ဖွယ်အချိန် - ဆိုဒါတစ်ခေါက် - ၂ ရမယ်။
အားလပ်ရက်များသို့မဟုတ်ပုံမှန်မဟုတ်သည့်အချိန်များ၌ဖွင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည့်အခြားအချိန်များကဲ့သို့သောအရာများအတွက်အထူးနာရီများကိုလည်းသင်ထည့်နိုင်သည်။ ဤစာရေးသားချိန်တွင်အီစတာချဉ်းကပ်လာချိန်တွင်ဂူဂဲလ်ကကျွန်ုပ်တို့၏အီစတာနာရီများကိုအတည်ပြုရန်အကြံပြုသည်။ သင်သည်အချို့သောအားလပ်ရက်များ၌ဖွင့်လှစ်ရန်စီစဉ်ထားပါကသင်၏နာရီကိုအတည်ပြုခြင်းကသင့်အား“ သင်ပွင့်နေပြီလား” မှသူတို့ကိုကယ်တင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဖုန်းခေါ်သည်
သင်တို့မူကား၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပမာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လာမည့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကိုပိတ်သည်ဟုပြောလိမ့်မည်။ သောကြာနေ့တွင်အချိန်ပိုနှင့်အတူဖွင့်ထားသော update ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ထည့်ပါလိမ့်မည်။
သင်လုပ်ကိုင်နေသည့်စီးပွားရေးအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ချိန်းဆိုမှုတစ်ခုလည်းပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ချိန်းဆိုမှုအင်္ဂါရပ်အထူးသဖြင့်ဆံပင်ညှပ်နှင့်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများအတွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသည် ကဲ့သို့သောဝန်ဆောင်မှုသို့ဆက်သွယ်ပါ သီဟသူရ or စိုင်းထီးဆိုင် သူတို့ကိုသင့်ရက်ချိန်းများကိုကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းပါ။
သင်၏ Google Business Profile ကိုလတ်ဆတ်စွာထားခြင်း
သင်၏ပရိုဖိုင်းကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုနောက်ဆုံးပေါ်ထားရှိခြင်းအပြင် Google My Business သည်သင်နှင့်လက်ရှိဖောက်သည်အသစ်များနှင့်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရန်နည်းလမ်းများပေးထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဘလော့ဂ်နှင့်ဆင်တူသည့်ပို့စ်၏အားသာချက်ကို အသုံးပြု၍ ဖောက်သည်များသည်ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များ၊ အထူးဖြစ်ရပ်များသို့မဟုတ်သင်၏စီးပွားရေးနှင့်အခြားအဖြစ်အပျက်များအကြောင်းသိစေရန်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အထူးကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုနှင့်စာမူတစ်ခုဖန်တီးကြစို့။ စာနယ်ဇင်းမျက်နှာပြင်၏ထိပ်ရှိဘားမှ“ Add Offer” ကိုရွေးချယ်ပါ။ ခေါင်းစဉ်တစ်ခု၊ ကမ်းလှမ်းမှုရက်စွဲများနှင့်ဓာတ်ပုံများထည့်ရန်သင့်အားတောင်းဆိုလိမ့်မည်။ ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုစီအတွက်ဓာတ်ပုံ ၁၀ ခုအထိထည့်နိုင်ပြီး၊ သင်၏တင်ဆက်မှုအတွက်လုပ်ရင်လုပ်မယ်ဆိုရင်များစွာသောထပ်ပေါင်းထည့်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းပါသည်။ ဖော်ပြချက် (သို့) ကူပွန်ကုဒ်များကဲ့သို့သောနောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလည်းသင်ထပ်ထည့်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အလိုအလျောက်ဖြစ်သည်။ Publish ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ သင်၏ပို့စ်သည်သင်၏ဖောက်သည်အားလုံးအတွက်တွေ့မြင်ရလိမ့်မည်။
နောက်တစ်ခုလုပ်ကြည့်ရအောင် ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ယေဘူယျ update ကိုလုပ်ပါမယ်။ Update post အမျိုးအစားသည်အခြားတင်ပို့မှုအမျိုးအစားများနှင့်သက်ဆိုင်မှုနည်းပါးသောကြောင့်သင်၏စီးပွားရေးအကြောင်းလူများအားရိုးရှင်းစွာသတိပေးရန်အလွန်ကောင်းသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ထပ်မံ၍ သင်သည်ဓာတ်ပုံများစွာထည့်နိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏ post ကိုရေးပါလိမ့်မယ်။ ပိုမိုရှည်လျားပြီးဖော်ပြရန်ပိုကောင်းသော်လည်း၊ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ခလုတ်တစ်ခုထည့်ရန်သင်ရွေးချယ်ခွင့်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ခလုတ်၏လုပ်ဆောင်ချက်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ Button ရွေးချယ်မှုများတွင်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်ခြင်း၊ အွန်လိုင်းတွင်ကြိုတင်မှာကြားခြင်းသို့မဟုတ်ပိုမိုလေ့လာခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာနိုင်သော“ ပိုမိုလေ့လာရန်” ရွေးစရာကိုရွေးချယ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သို့ပြန်ချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
သင့်တော်သလိုမြင်သည့်အတိုင်းအခြားစာမူအမျိုးအစားများကိုသင်စမ်းသပ်နိုင်သည်။ ထုတ်ကုန်များထည့်သွင်းခြင်း၊ ရောဂါကူးစက်ခြင်းဆိုင်ရာနောက်ဆုံးသတင်းများပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ ဖြစ်ရပ်များဖန်တီးခြင်းနှင့်သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်း။
သင်စာမူတပုဒ်ကိုထုတ်ဝေသည့်အခါတိုင်းလူမှုမီဒီယာနှင့်အီးမေးလ်ဖြင့်ထိုပို့စ်ကိုဝေမျှနိုင်လိမ့်မည်။ သင့်တွင်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်သင်နောက်လိုက်သောရှိပြီးသားဖောက်သည်အခြေစိုက်စခန်းရှိပါက၎င်းသည်သင်၏စီးပွားရေးနှင့် ပတ်သက်၍ စကားလုံးကိုထုတ်ဖော်ရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ (အကယ်၍ သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်မရှိသေးပါကမကြာမီသင့်အတွက်နောက်ထပ်လမ်းညွှန်တစ်ခုပေးပါလိမ့်မည်။ )
သင်၏ပို့စ်ကိုမျှဝေရန်သင့်ပို့စ်၏အောက်ရှိ“ Share post” link ကိုနှိပ်ပါ။ Pop-up မှသင်သည် Facebook, Twitter သို့မဟုတ် email မှတဆင့်တိုက်ရိုက်မျှဝေနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် link ကိုကူးယူပြီးသင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာမျှဝေနိုင်သည်။
ဓါတ်ပုံများကိုရေးသားချက်များမှသီးခြားစီစီမံသည်။ သို့သော်ဓာတ်ပုံအသစ်များကိုပုံမှန်ထည့်ခြင်းဖြင့်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုကိုသင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး၎င်းသည်စဉ်းစားစရာသို့မဟုတ်စွမ်းအင်များစွာမလိုအပ်သောပိုမိုမြန်ဆန်သောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ဘယ်ဘက် sidebar ရှိ Photos link သို့သွားပြီး၊ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိအပြာရောင် + ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
သင်၏ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များ၏ဓာတ်ပုံများ၊ လုပ်ငန်းအတွင်းပိုင်းနှင့်အပြင်ဘက်သို့သို့မဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုကိုပေါင်းထည့်ပါ။ ဗွီဒီယိုတွေကိုလည်းထည့်နိုင်တယ်။ သင်၏ဓါတ်ပုံများကိုထည့်ရန် drag and drop သာပြုလုပ်ပါ။
ထုတ်ကုန်ဓာတ်ပုံများကိုသင်၏ယေဘုယျဓာတ်ပုံများထဲသို့ထည့်မည့်အစားထုတ်ကုန်များအဖြစ်သီးခြားထည့်နိုင်သည်။ သုံးစွဲသူများသည်ပုံများကိုမြင်နေဆဲဖြစ်သော်လည်းထုတ်ကုန်အမည်၊ ဖော်ပြချက်၊ အမျိုးအစားနှင့်စျေးနှုန်းစသည့်အပိုအချက်အလက်များကိုသင်ထပ်ထည့်နိုင်သည်။ ဘယ်ဘက်ရှိ menu ရှိ Products link ကို အသုံးပြု၍ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကို ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ဂူဂဲလ်၏သုံးသပ်ချက်များသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစွာအတွက်လုပ်သည်ဖြစ်စေချိုးဖောက်သည်။ များစွာသောရှာဖွေသူများနှင့်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များသည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်အဘယ်အရာမှန်သည်၊ မည်သည့်အရာသည်မှားယွင်းကြောင်းကိုကြည့်ရန်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများသို့ချက်ချင်းသွားလိမ့်မည်။ ဂူဂဲလ်တွင်သင်၏ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများများနှင့်ပိုကောင်းလေ၊ သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့ ၀ င်ရောက်ရန်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များများဖြစ်နိုင်လေဖြစ်သည်။
မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (အပြုသဘောပါဖြစ်စေ၊ အနှုတ်ဖြစ်စေဖြစ်စေ) ကိုမတားဆီးနိူင်သော်လည်းသင်၏သုံးသပ်ချက်များကိုစီမံရန်သင်လုပ်နိုင်သည့်အချက်နှစ်ချက်ရှိသည်။
သင့်ဖောက်သည်များအားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမပြုရန်တောင်းဆိုခြင်းသည်မမှားပါ။ တကယ်တော့ Google ကအဲဒီလိုလုပ်ဖို့သင့်ကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ သင်သည်ယဉ်ကျေးစွာဖြင့်သော်လည်းဖောက်သည်များအားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုထွက်ခွာရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်သင်ကသင်၏ဖောက်သည်များအားပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ထွက်ခွာသွားရန်အားပေးသည့်ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းတစ်ခုတွင်မှတ်စုကဒ်သို့မဟုတ်သတိပေးချက်တစ်ခုထည့်နိုင်သည်။ သင်၏ပုံမှန်ဖောက်သည်များပြန်လည်သုံးသပ်မှုတစ်ခုထပ်မံထည့်သွင်းရန်တောင်းဆိုခြင်းသည်သင်၏အဆင့်ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
သင်ရရှိသောပြန်လည်သုံးသပ်မှုသည်ကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ ဆိုးသည်ဖြစ်စေတုံ့ပြန်မှုကိုခဏယူပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ကောင်းမွန်သောစကားတစ်ခွန်းမျှမပြောနိုင်ပါက၊ အပြုသဘောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအဘို့, ရိုးရှင်းတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လောက်ပေလိမ့်မည်။
သင်ကြယ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းထက်နည်းနည်းရလာပါကပြန်လည်သုံးသပ်သူ၏မှတ်ချက်ကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးသူတို့၏အတွေ့အကြုံတိုးတက်စေရန်သင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုပြသသည့်တုန့်ပြန်မှုတစ်ခုကိုပေးပါ။ သင်၏ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကိုဖတ်ရှုသူများသည်သင်၌ကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံကိုပေးအပ်ရန်စေ့စပ်ထားကြောင်း၊ ထို့အပြင်ကန ဦး ဆိုးရွားသည့်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုမှထွက်ခွာသွားသူအားထပ်မံလည်ပတ်ရန်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ပင်တိုက်တွန်းနိုင်ပါသည်။
သင်၏ဂူဂယ်လ်ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးပရိုဖိုင်းကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းသည်တစ်ကြိမ်သာအလုပ်မဟုတ်ကြောင်းသတိရပါ။ သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုအတည်ပြုရန်၊ အကြောင်းအရာအသစ်များကိုထည့်သွင်းရန်နှင့်သင်၏ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများကိုစီမံရန်အတွက်ပုံမှန်စစ်ဆေးပါ။ သင်၏စီးပွားရေးပရိုဖိုင်းကိုတည်ဆောက်ရန်သင်အကူအညီလိုနေလျှင်၊ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ကျနော်တို့ကူညီဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့မှတစ်ဆင့်စီးပွားရေးလုပ်သူချင်းများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းကိုလည်းသင်စဉ်းစားနိုင်သည် Dutchtown စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များ Facebook အုပ်စု.
ဖောက်သည်များမှသင်၏စီးပွားရေးကိုအွန်လိုင်းတွင်ရှာဖွေရန်အတွက်လမ်းညွှန်ချက်များပိုမိုရယူပါ။ စီစဉ်ထားသည့်ဘာသာရပ်များတွင်သင်၏စီးပွားရေးအတွက် Facebook စာမျက်နှာတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ရိုးရှင်းသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းဆိုင်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ဤလမ်းညွှန်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးပမ်းမှု၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည် Dutchtown စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထောက်ပံ့သည် အရင်းအမြစ်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းညွှန်များတွင်သင်တွေ့ချင်သောအရာတစ်ခုခုရှိပါက, ကျွန်တော်တို့ကိုသိစေ.
ဒိန်းမတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ Dutchtown စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထောက်ပံ့ခြင်း Google My Business အပိုင်း ၂ - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် Dutchtown ၏လမ်းညွှန်